ज्युँदो मान्छे (२०७४ आषाढ २७, मंगलवार)
दाइ, म दिनेश !
दिनेश ! उमऽ को दिनेस रे..?
तपाइले एयर्पोट भेटेको शाही, दांङ`को ।
दुई बर्ष अंघि हजुरले नेपाल फर्काएको ....
ए , तिमि ! ओ माइ गड ...
हं ..? के भन्छ हौ !
सायद यो माटोमा तेस्रो पटक भएकोले होला मलाइ कतै अल्मलिनु परेन,मेरा पाइलाहरु गन्तव्य प्रती प्रस्ट थिए । इमिग्रेसन पार गर्नै लाग्दा, घोप्टी परेको मानिस आकृतिले मेरो दृस्टि खिच्यो । देखें - एउटा युबा शरीर नर्थफेसको ज्याकेटमा भुइँमा थ्यांचिएको रहेछ । घाँटिको रुद्राक्ष , नजिकै रहेको झोला र बर्णले उ नेपाली हो भन्ने संकेत गर्यो ।
ब्यागलाइ थोरै साइड च्यापेर नज्दिक गए, सोधे - नेपाली हो ?
अनि के भयो र ? लाइनमा नबसेर !
कार्ड झिक्नुस र उ : त्यो लाइनमा बस्नुस । टाउको हल्लाएर हुन्छको जबाफ दिएका उनलाइ अघि राखेर म पछाडी उभिए । एक्कैछिनमा हामी बाहिर निस्कियौ । केहि मिनेटको पैदलमा उसको नाम र कोरियामा उसको बसाइको बिसयमा मैले सोधखोज गरिसकेको थिए ।
एकबिहान गोबिन्द ले भने , मितज्यु - यी ब्यालेन्समा छैनन । कोरिया यी बस्लान जस्तो लाग्दैन ।
त्यो बिचमा दिनेश र म एउटा काम हेर्न ओइदो गयौ । फलाम कम्पनी रहेछ, ग्रेन्डिङ्को काम - करिब २३ लाख तलब ।
परियार जातिकी छोरी बिहे गरेकोले नै उनिहरुलाइ समाजबाट निकालिएको रहेछ । लोकसेबामा लिखित पास गरेर अन्तर्बार्तामा फ्यालिएको कुरा गर्दै गर्दा उनी पग्लिरहेका थिए । लोकसेबा प्रती उनको लगाब अनौठो रहेछ । बाचियो भने नाम निकाल्ने ज्युँदो आशा बोकेका उनी कुराको बिच-बिचमा मर्न पाए हुन्थ्यो`को आसय ब्यक्त गर्थे ।
भाषाको समस्या, पैसाको अभाब र रोगी शरीर ! प्रकाश शर , भो म फर्कन्छु । उन्लाइ बिगतले च्याँप्यो । दुखहरु भयन्कर रहेछन, जसलाइ बाड्दा पनि दुख्दो रहेछ ।
त्यतिबेला लगातार ३ महिना हस्पिटल बस्दा ९० लाख वन , (८ लाख नेपाली) सक्किएको रहेछ । गाउँले साथिहरु र उनका आफनै भाइले अब हस्पिटल राखेर उपचार संभब नभएपछी नेपाल फर्काइएका रहेछन । बिदा दिन आनकानी गरेको कम्पनिले लेटर दिएर अरु कम्पनिमा काम गर्न सक्ने गरि बाटो खुलाएको रहेछ ।
र नेपाल फर्किएछन । उपचारमा उनी रोगी देखिएनन ।
सबै जड मनस्थिती रहेछ हेर्नुस ! उनी आफु डिप्रेसनमा रहेको स्विकार गरे ।
४१ दिन नेपाल बसेर फर्किएका उनलाइ नेपाल एयर्पोर्ट देखि अप्ठ्यारो महसुस भएछ । उनी फेरि पुरानै अबस्थामा फर्किएछन, डिप्रेसन फर्किएछ ।
रिन, कोरियाको अप्ठेरो, एक्लि श्रीमति र बहिस्कार गरेको समाजले उनको मनस्थितिमा पारेको गहिरो असरको परिणती थियो उनको आजको समय ।
हामी पार्क बाट फर्कियौ । बेलुका जेम्स दाजुको आगमन पछि उनको अबस्थाको मुल्यान्कन गरि घर पठाउने निधो गरियो ।
उनि खुशि देखिए ।
तीन दिनको बसाइमा उनी प्यारा भएका थिए मेरा । राती बाहिर निस्कियौ सबै जना । साथिहरुले उनलाइ केही उपहार किन्दिए । मैले उनको भबिस्य लोकसेबामा रहेको र यसरी पढ्नुस भन्ने सल्लाह दिए । उनले श्रीमति संग कुरा गराए । मैले सान्त्वना दिए । उ धेरै गर्न सक्ने र जिन्दगी लामो रहेको कुरा स्विकारिन । करिब आधा घन्टाको कुराकानिमा, रिन र अगाडि आउने जटिलताको बिसयमा चर्चा गरियो । सोमबार बिहान उनि नेपाल उडे ।
नेपालको लागि जहाज उड्नु भन्दा पहिला उनले आफ्नो फेसबुकबाट मलाइ उडाएछन । ब्लक गरेछन ।
त्यो ब्लक किन थियो ? ब्लक आफ्नै भाइलाइ पनि रहेछ !
उनी नेपाल गएपछी के गरे ?
उनि सरकारि सेबामा कसरी प्रबेश गरे ?